​बुवा, अर्थात् जिउँदो भगवान
Interesting Facts About Ballistic Missiles | Utsav 360 WATCH NOW
रिना मृत्यु प्रकरण : प्रेमी भनिएका कमलको पोलिग्राफ टेस्ट
‘धर्म प्रचारमा बाधा हुने भन्दै जबरजस्ती गर्भपतन र परिवार नियोजन’
'पथरीकी रिनाको मृत्यु माथिबाट खसेर चोटका कारण ', यस्तो आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट
एनसेलविरुद्ध सत्तारुढ पार्टीका विद्यार्थी संगठनको विज्ञप्ती, एनसेल प्रयोग नगर्न आह्वान
जनप्रतिनिधीले नै छोराछोरी बोर्डिङमा पढाएपछि जंगिए विद्यार्थीहरु
श्रीलंकामा जस्तै आतंककारी आक्रमण नेपालमा पनि हुन सक्ने, यस्ता छन् आधार
​बुवा, अर्थात् जिउँदो भगवान
आइतबार २४, भदौ २०७५
“मेरो छोरीलाई त पछि नेता बनाउने होे” यी शब्द मेरो मानसपटलमा अझै ताजै छ । मेरो बाबाले म सानो छँदा अक्सर साथीभाईका माझ बोल्ने गर्नुहुन्थ्योे ।
हुन पनि बाबाले छोरी ठुलो भएपछि नेता बन्नु पर्छ है भनेर बारम्बार मलाई भनिराख्नु हुन्थ्यो । सानैबाट राजनीतिक दलका ठुल्ठुला सभा समारोहमा मलाई पनि साथै लैजानुहुन्थ्यो ।
नेताका चर्का भाषण सुनेर हुर्केकी मैले सानो छँदा बाबाको सपना पुरा गर्छु भनेर धेरै ठाउँ तिमी ठुलो भएर के बन्छौ भूमिका भनेर सोध्दा निर्धक्क भएर नेता बन्छु भन्ने जवाफ फर्काउथेँ ।
मेरो उत्तर सुनेर सबैजना हाँस्थे ।
किनकी आफू ठुलो भएपछि के बन्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिदा हेरक बाल मस्तिष्कबाट डाक्टर, पाइलट, इञ्जिनियर भन्दा खासै फरक उत्तर आउदैन थियो । मेरो बाबाको चाहना राजनीतिक दलसँग आवद्ध रही देश विकासमा लाग्नु पर्छ भन्ने थियो ।
युवाहरुले नेतृत्व गरी देश विकास गर्ने हो, देशलाई समृद्ध बनाउने हो भन्नुहुन्थ्यो । देश मै रहेर देशको उन्नती र प्रगतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने भाव हामीमा फैलाईरहनु हुन्थ्यो ।
यद्धपी आज पनि मेरो बाबाको त्यो सपना जस्ताको त्यस्तै छ । तर समय बदलियो, मेरा इच्छा आकांक्षा पनि बदलिए । नेता बन्ने अबको मेरो योजना रहेन । तर राजनीतिक आस्था चाहिँ छ । अनि पछि समयले त्यो भूमिका मागेको खण्डमा यो भूमिका त्यो भूमिका निर्वाह गर्न पछि पर्दिनँ । किनकी त्यो सपना मेरो बुवाले सानैदेखि सुन्दै आउनुभएको सपना हो ।
बुवा, हरेक दुःख कष्ट पीडालाई झेल्दै आफ्ना सन्ततीका खातिर थोरै खुशीका त्यान्द्रा बटुल्न रगत, पसिना सबै एक गर्ने मान्छे ।
जसको मेहेनतलाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । हाम्रा बुवाले हाम्रो सुखद भविष्यका लागि गर्नु भएको मेहेनत, परिश्रम र हामीलाई उचाईमा पु¥याउन आफ्ना स–साना खुशीलाई कुल्चेर गर्नुभएको संघर्षको गुण जिन्दगीभरी तिरेरै नसकिने ठूलो ऋण पनि हो । त्यस्तो ऋण, जुन फिर्ता पाउने आशा बुवाले कहिल्यै गर्नुहुन्न । दिइमात्र रहने एउटा त्यागी दानवीर हो बुवा ।
धेरैले भन्छन्, बुवाको लागि सन्तान अनि त्यसमा पनि छोरी खास हुन्छन् रे । हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । मेरा बुबा मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ । र मेरा हरेक कुराको ख्याल राख्नुहुन्छ । भाग्यवश मेरो बुवा र म बिच धेरै कुरा समान छन् । खाने, लाउने, बोल्ने मात्र नभई हरेक व्यवहारपनि मिल्छन् । यसअर्थमा बुवा मेरो मिल्ने साथी पनि हो ।
हाम्रा बुवाहरुले हामीलाई यति माया गर्नुहुन्छ, हाम्रा बुवा साँच्चै हाम्रा लागि देखिने भगवान हुन् । भगवानलाई त बरु हामीले केही कुरा मागेपछि मात्र पाउँछौ । तर बुवाले हाम्रो इच्छा आकांक्षा बुझेर हरेक खुशी बटुलिदिन सदैव मेहेनत गर्नुहुन्छ ।
हाम्रा जन्मदिन/चाडबाड/नयाँ वर्ष लगायत हरेक पर्वमा बुवा हामीलाई नयाँ कपडा किनिदिनु हुन्छ, हाम्रा स साना खुशीका लागी बुवाका कति जोर कपडा च्यातिए हामीलाई पत्तो पनि हुन्न । तर बुवालाई हामीलाई समय समयमा के खान मन लाग्छ, त्यो थाहा छ ।
त्यसैले बुवा जस्तो व्यक्तिलाई हामीले वर्षको एक दिन सम्मान गर्नुभनेको त्यो त्याग, बलिदान, प्रेम र स्नेहको अपमान हो । बुवाको मुख हेर्ने दिन एउटा प्रतिक हुन सक्ला । तर बाँकी दिनपनि बुवालाई माया सम्मान र आदर गर्न सक्ने मानिस मात्र वास्तविक मानव हृदय भएको प्राणि हो । वुवालाई वर्षैभरी सम्मान गर्न नसक्ने प्राणि मानिस होइन ।
आफ्ना सन्ततीलाई नेता वा नेतृ बनाउने सपना कमै बुवाआमाको हुन सक्ला । हरेकका बुवाका आफ्ना छोराछोरी प्रतिको सपना फरक हुन सक्छ । बुवाका सपना चाहे जेसुकै हुन्, जोकोहीका बुवाले आफ्ना सन्ततीको कुभलो कहिले सोच्दैनन्, सोच्नै सक्दैनन् ।
आज बुवाको मुख हेर्ने दिन, शब्दहरु खासै केही छैनन् । राजनीतिक दलको नेत्तृत्व गर्न त नसकुँला, तर मेरो जीवनलाई सरल सहज र सही ढँगले नेतृत्व गर्नु सँकु, देशको जिम्मेवार नागरीक बन्न सँकु । सो क्रममा बुवाको माया सधैं पाइरहुँ ।
स्नेहको ठूलो सागर मेरोलागि कहिल्यै नरित्तिओस् । मेरो मन भित्रको बुवा प्रतिको श्रद्धा सधै यस्तै रहनेछ, सधैभरी यसैगरी ।
​यसकारण सुस्त छ हाम्रो बजार (आर्थिक विश्लेषण)
नदेखिने देवी पुज्ने अनि देखिने देवीलाई पैताला राख्ने ?
झापामा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु
नापी कार्यालय धरानका चार जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
फ्यानको मोबाइल खोसेको आरोपमा सलमानविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
श्रीलंका बिस्फोट : किन घटाइयो मृतकको संख्या ?
२०७६ बैशाख १३ गते शुक्रबारको राशिफल
मोरंगमा दुईवटा शव फेला